चामलको माडले पनि बनाउँछ अनुहार चम्किलो र मुलायम, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग – Post Patrika
अर्का संगको एक रातले मलाई घर न घाट को, अब म कहाँ जाउँ ! ( भिडियो सहित हेर्नुहोस )
बचाउन निकै प्रयास गर्दा पनि रहेनन् अब हामी माझ मेची महाकाली जागरण अभियानका अध्यक्ष बोहरा !
टिप्परले स्कुटरलाई ठक्कर दिंदा दुई जना युवती गम्भीर घाइते
मुख्य पृष्ठ /Intresting/चामलको माडले पनि बनाउँछ अनुहार चम्किलो र मुलायम, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग
3,3042minutes read
काठमाडौँ । अहिले अनुहार चम्किलो बनाउन, नरम बनाउन वा समग्र अनुहारको सौन्दर्यमा निखार ल्याउनका लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्दैन।
बजारमा भनेजति सौन्दर्य प्रशाधन छन्। अनुहारमा लगाउने थरीथरीका क्रिम छन्, जो सौन्दर्य बढाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ।
तर, यस्ता क्रिममा रसायनको मिश्रण हुन्छ । यसले प्राकृतिक सौन्दर्यलाई भने नष्ट गर्छ र अनुहारमा कृतिम सुन्दरता दिन्छ। साथसाथै यस्ता प्रसाधनले दीर्घकालिन रुपमा वेफाइदा पनि गर्छ।
त्यसैले त अहिले प्राकृतिक रुपमै कसरी सौन्दर्य कायम राख्ने भन्ने कुरामा बढी सर्तक हुन थालिएको छ । अतः प्राकृतिक सौन्दर्य खोज्नेहरुका लागि एउटा राम्रो विकल्प हुनसक्छ, चामलको माड ।
कसरी अनुहार चम्काउँछ माडले ?
चामलको माडबाट अनुहार चम्काउन सकिन्छ । अनुहारलाई मुलायम बनाउन सकिन्छ । किनभने यसले छालालाई स्वास्थ्य र आकर्षक राख्न सहयोग गर्छ।
विशेषगरी चामलको माडले छाला कसिलो बनाउनुका साथै छालाको रोमक्षिद्रलाई कसिलो गर्छ।
जापानी युवतीहरुले आफ्नो छाला तथा कपाल चम्काउनका लागि वर्षौदेखि यो विधि अपनाउने गरेका छन्। यसमा लवण, विटामिन तथा एन्टी अक्सिडेन्ट पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ, जसले छालालाई नरम बनाउँछ । यसलाई क्लिञ्जरको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
कपालको लागि फाइदाजनक
चामलको माड अनुहारको लागि फाइदाजनक त छ नै, कपालको लागि पनि राम्रो छ । पातलो तथा रुखो कपालको लागि यो कुनै अमृत भन्दा कमी छैन।
चामलको माडलाई कपालमा लगाएर करिब २० मिनेट राखेपछि त्यसलाई स्याम्पू तथा कन्डिसनरले धुनुपर्छ । यसले कपाल सुन्दर हुनुका साथै चम्किलो हुने गर्छ ।
चामलको पानीमा प्रोटिन, भिटामिन तथा एन्टी अक्सिडेन्ट पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ । जसको प्रयोगले छाला नरम हुन्छ । यसको प्रयोगले छालाको रङ चम्कनुका साथै अनुहारका दाग-धव्वा तथा चाउरीपना कम हुन्छ ।यसबाहेक पनि उक्त माडको प्रयोगले छाला टाइट हुन्छ ।
सन क्रिमको काम गर्छ
चामलमा ओरिजेनोल नामक तत्व पाइन्छ, जसले छालालाई सुर्यको विकिरणबाट सुरक्षा प्रदान गर्नमा सहायता प्रदान गर्छ । गर्मीबाट बच्न तथा शरीररलाई ठन्डा राख्न पनि चामलको पानी (माड) पिउनु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ ।
चामलको पानी छालाको लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ । यसको प्रयोगले छालामा विभिन्न फाइदा पुग्छ । यसले छालाको कोशिकाको विकासद्धारा छाला टाइट गरी चाउरी पर्नबाट जोगाउँछ । त्यतिमात्र यो पानीले मुख मात्र धोएमा पनि निकै फाइदा हुन्छ ।
एन्टी एजिङ एजेन्ट
उमेर बढ्दै जाँदा छाला चाउरी पर्न थाल्छ । यसलाई कम गर्न चामलको माडले अनुहारमा मसाज गर्नु पर्छ। यसमा पाइने एन्टी अक्सिडेन्ट तत्वले अनुहारको चाउरीपनालाई जडैबाट हटाउन सहायता प्रदान गर्छ।
यसरी गर्ने प्रयोग
एक कप चामललाई राम्ररी सफा गरेर केहीबेर पानीमा भिजाउनु पर्छ। आधा घण्टा पश्चात्त जब चामलमा रहेको पौष्टिक तत्व पानीमा घुल्न थाल्छ, तब चामल राखेको भाडालाई ग्यासमा राखेर चामललाई पाक्न दिनु पर्छ।
चामल पाकेपछि त्यसमा रहेको पानी (माड)लाई निकालेर चिसो हुनका लागि छोड्नु पर्छ। अब यो पानीले अनुहारमा हल्का हातले मसाज गर्नुपर्छ।
बेसन वा चामलको पिठो मिसाएर पनि उक्त पानी प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसबाहेक, यसलाई कपालमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
श्रीमानले जव श्रीमतीको १४ प्रेमी भएको थाहा पाए, गरे यस्तो चकित् पार्ने निर्णय